I-Slave Boy Ilinge kwi-'Meno 'yePlato
Uboniso oludumileyo lubonisa ntoni?
Enye yeendima ezidumileyo kuyo yonke imisebenzi kaPlato -ngokuqinisekileyo, kuzo zonke ifilosofi -iindawo eziphakathi kweMeno. UMeno ubuza uSocrates ukuba unokubonisa ubungqina boluvo lwakhe olungaqhelekanga lokuba "konke ukufunda kuyakhumbula" (ibango lokuba uSocrates udibanisa nembono yokuphindukuzalwa). USocrates uyaphendula ngokubiza phezu kwenkwenkwe yamakhoboka kwaye, emva kokumisela ukuba akazange abe noqeqesho lwezemathematika, ukumisa ingxaki ye-geometry.
Inkwenkwe ibuzwa ukuba iphindwe kabini indawo yesikwere. Impendulo yakhe yokuqala yokuqinisekisa kukuba ufezekisa ngoku ngokuphindaphinda ubude bamacala. USocrates ubonisa ukuba oku, okwenene, kwakha isikwere ezine izihlandlo ezinkulu kuneyona nto yokuqala. Le nkwenkwe ke iphakamisa ukuphakamisa amacandelo ngesiqingatha sabo ubude. USocrates ukhankanya ukuba oku kuya kujika i-2x2 square (indawo = 4) ibe kwisikwere se-3x3 (indawo = 9). Kule nkalo, inkwenkwe iyayeka kwaye iyichaza ngokulahlekelwa. U-Socrates uyamkhokela ngeendlela ezilula zokuphendula ngeempendulo kwisigqibo esifanelekileyo, oko kukusebenzisa ukudibanisa kwesikwere sokuqala njengesiseko sebala elitsha.
Ngokutsho kukaSocrates, ukukwazi ukufikelela enyanisweni yenkwenkwe kwaye iyakubona njengokuba ibonisa ukuba sele isenalo ulwazi ngaphakathi kwayo; imibuzo eyabuzwa nje "yavuselela," okwenza kube lula kuye ukuba ayikhumbule. Uthi, ngaphezu koko, ukuba ekubeni le nkwenkwe ayifumananga nolwazi olunjalo ebomini, kufuneka ukuba wayifumene ngexesha elithile ngaphambili; Enyanisweni, uSocrates uthi, kufuneka ahlale eyazi, okubonisa ukuba umphefumlo awufi.
Ukongezelela, oko kuboniswe kwimizi-geometry nayo inamanye onke amagatsha olwazi: umphefumlo, ngandlela-thile, usele inyaniso malunga nazo zonke izinto.
Ezinye zeenkcenkcazo zikaSocrates apha ngokucacileyo zilula. Kutheni sifanele sikholwe ukuba amandla angenangqondo yokuqiqa imathematika kuthetha ukuba umphefumlo awufi?
Okanye ukuba sele sinalo ulwazi phakathi kwezinto ezinjengezinto zokuziphendukela kwemvelo, okanye imbali yeGrisi? USocrates ngokwakhe, uyavuma ukuba akaqinisekanga ngezinye izigqibo zakhe. Nangona kunjalo, ngokuqinisekileyo ukholelwa ukuba ukubonakaliswa kwinkwenkwe yomfana kubonisa into ethile. Kodwa ngaba kunjalo? Yaye ukuba kunjalo, yintoni?
Enye imbono kukuba le ngqungquthela ibonisa ukuba sinemibono yangasese-uhlobo oluthile lwolwazi esilunokuzalwa ngalo. Le mfundiso ngenye yezona ziphikisana kakhulu kwiimbali zefilosofi. I-Descartes , oye wathinteka ngokucacileyo nguPlato, wayivikela. Uthi, umzekelo, ukuba uThixo uveza ingcamango yakhe ngokwalo mqondo ngamnye owenzayo. Ekubeni wonke umntu unalo mbono, ukholo kuThixo lufumaneka kubo bonke. Kwaye ngenxa yokuba imbono kaThixo yimbono yokuphila okungapheliyo, yenza ukuba olunye ulwazi luncike kwiingcamango ezingapheliyo kunye nokufezekiswa, iingcamango esingaze sifike kumava.
Imfundiso yeengcamango zangasese zihambelana ngokunxulumene nefilosofi yeengcamango zabantu abacingayo njenge-Descartes neLeibniz. Yayihlaselwa ngokugqithiseleyo nguJohn Locke, owokuqala wabantu baseBrithani abaziintloko. Incwadi yokuqala ye-Locke's Essay kwiNgqiqo yoluntu yinto ehloniphekileyo yokulwa nayo yonke imfundiso.
Ngokutsho kukaLikeke, ingqondo ekuzalweni yi "tabula rasa," i-slate engenanto. Yonke into ekugqibeleni siyayazi ifundwa kumava.
Ukususela kwinkulungwane ye-17 (xa i-Descartes neLikeke ivelisa imisebenzi yabo), ukungaqiniseki kwemibono malunga neengcamango ezingenangqiqo ngokuqhelekileyo zinegunya eliphezulu. Nangona kunjalo, inguqulelo yemfundiso yavuselelwa yilwimi likaNoam Chomsky. UChomsky wabethwa yimpumelelo ephawulekayo yomntwana ngamnye ngolwimi lokufunda. Kwiminyaka emithathu, abaninzi abantwana baye bazi kakuhle ulwimi lwabo lwasekhaya ukuze bavelise inani elingenamkhawulo lwezivakalisi zangaphambili. Olu buchule ludlula ngaphaya koko banokukufunda ngokuphulaphula oko abanye bathi: umkhiqizo ungaphezulu kwegalelo. UChomsky uxela ukuba oko kwenza ukuba oku kwenzeke ukuba ngumntu ongenamntu wokufunda ulwimi, amandla okubandakanya ukuqonda into ebizwa ngokuthi "igrama" jikelele-isakhiwo esilunzulu-ukuba zonke iilwimi zoluntu zabelana.
Nangona ulwazi oluthile lwolwazi olungenangqondo olunikezwa kwi- Meno lufumana abantu abancinci namhlanje, umbono oqhelekileyo ukuba siyazi izinto ezithile eziphambili-oko kukuthi ngaphambi kokuva-kusekhona ngokubanzi. Iimathematika, ngokukodwa, kucingelwa ukubonisa olu hlobo lolwazi. Asifika kwiiyoromethi kwijometri okanye kwi-arithmetic ngokuqhuba uphando oluthile; senza iinyaniso zoluhlobo nje ngokucinga. U-Socrates unokubonisa ubungqina bakhe ngokusebenzisa isicatshulwa esibanjwe ngentonga engcolileyo kodwa siyaqonda ngokukhawuleza ukuba i-theorem iyinyani kwaye iyinyaniso yonke. Kusebenza kuzo zonke izikwere, kungakhathaliseki ukuba zinkulu kangakanani, zenziwe ntoni, xa zikhona, okanye ziphi na zazo.
Abafundi abaninzi bakhononda ukuba le nkwenkwe ayifumene indlela yokuphinda kabini indawo yesikwere ngokwakhe: USocrates uyamkhokela kwimpendulo ngemibuzo ehamba phambili. Lena Yinyaniso. Le nkwenkwe yayingeke ifikelele kwimpendulo yedwa. Kodwa le nkcaso ilahlekelwa yinkcazo enzulu yembonakalo: le nkwenkwe ayikufundanga nje i-formula ephindaphinda ngaphandle kokuqonda kwangempela (indlela ininzi esenza ngayo xa sithetha into enje, "e = mc square"). Xa evuma ukuba isiphakamiso esithile siyinyani okanye ingcaciso iyasebenza, uyakwenza ngenxa yokuba uyifumene inyaniso yalo mbandela. Ngoko ke, ngoko-ke, unokufumanisa i-theorem ngokubhekiselele kuyo, kunye nabanye abaninzi, nje ngokucinga kakhulu. Kwaye sinako sonke!
I- Meno yePlato (itekisi)
Yintoni i-Psychological Egoism?
IiCotes Philosophical kwi-Art
Iingcaphulo Zefilosofi Ngobudlova
Abafilosofi Bacinga Njani Ngobuhle?
Izizathu ezifanelekileyo zokufunda iLogic
Isingeniso kwiNkcazo yeSidima
Iintlobo ezintathu Zezilonda zomthi
Indlela Yokukhusela Iprojekthi Yomoto Yakho nge-Primer i-Easy and Cheap Way
I-Tezcatlipoca - iAztec UThixo wobusuku kunye nezibilini zokubhema
Yintoni Eyenziwe Ngomlilo?
Ukunyuka kwe-Spitzkoppe: Intaba yeGranite eNamibia
Izidingo zokuhlala kwiCongress
Imbali yeCube yeRubik
Ukusebenza kweGomora: Ukutshabalalisa iHamburg
5 Iimigaqo zoMfundisi weBantu abadala
Iintlobo, iMisebenzi, kunye nokuLondolozwa kweeReal Coref
NgoSeptemba 11 iMemorials - I-Architecture yokukhunjulwa
Iinqwelo ezilishumi zeeFiel-Imoto ephumelelayo ka-2014
U-Edwin M. Stanton, uNobhala weMfazwe kaLincoln
Ibali likaDao, uMahokazi we-Ancient Carthage
I-Chemistry Quiz-Atom Basics
Iintlabathi: iMfazwe yaseArsuf
Ezi ziThuthi eziThuthileyo Zizinika i-Cat Memes I-Run For Their Money
Izakhiwo zengcweti, eziphefumulelwe nguMbutho weNgesi
Imbali kaJohn Birch Society
Ngaphambi kokuba Uthenge izixhobo zoBugcisa boBugcisa bokuBumba
Iingcaphuno kunye namazwi aseCervantes
Into enokuyenza Ukuba Ulahleka i-Scholarship